မိုးပေါ်ကစာနဲ့ copyright ကိစ္စ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိုးပေါ်ကစာနဲ့ copyright ကိစ္စ
မိုးပေါ်ကစာနဲ့ copyright ကိစ္စ
Posted by Zaw Wonna on May 3, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 25 comments
အခုတလောမှာ အလုပ်ကလည်း အိုတီဆင်းရတဲ့ရက်တွေ များနေတာကြောင့် ပုံမှန် စာမရေးဖြစ်တာတောင် အတော် ကြာသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်တာနက်က အလကားရတဲ့ eBook လေးတွေကို ဒေါင်းလုပ်ပြီး အလုပ်ထဲမှာ အားတဲ့အချိန် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ တစ်နေ့ညက Vol.(5), No.(21),April – 20 – 26, 2011 ထုတ် SHADE of the mandalay hill (မန်းတောင်ရိပ် အနုပညာဂျာနယ်) ဒေါင်းလုပ်ထားတာလေးကို ဖတ်ကြည့်မိတော့ ကျနော်ရေးထားတဲ့ စာမူ တပိုင်းတစကို “ယောက်ျားဆိုတာ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သွားတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီစာကို “Living Together နဲ့ မြန်မာလူငယ်များ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ MG မှာနဲ့ ကျနော့်ဘလော့ www.shwemyine.com မှာပဲ ရေးခဲ့တာပါ။
ဘလော့ဂါတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ စာမူလေးတွေကို အခြားဘလော့က ကူးယူပြီး ကိုယ့်ဘလော့မှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ တင်ထားကြတာကို မကြာခဏ တွေ့ရပေမဲ့ ငွေကြေး အကျိုးအမြတ် အတွက် မဟုတ်ပဲ ဝါသနာအရ လုပ်ကြတာမို့ သိပ်အပြစ်မတင်ချင်ပါဘူး။ တခါတလေတော့ ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ စာတစ်ချို့ကို googling လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ နေရာပေါင်းများစွာမှာ ရောက်နေတာမျိုး ဘလော့ဂါ အတော်များများ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကူးတင်သူ အနေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာစွာနဲ့ စာမူပိုင်ရှင်ရဲ့ နာမည်လေးလောက်တော့ ထည့်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခုကတော့ စီးပွားရေးအနေနဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်မှာ ဘလော့က အလကားရတဲ့စာ ဆိုပြီးတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ ပုံနှိပ်လိုက်တာကိုတော့ လက်မခံချင်ပါဘူး။ လက်မခံနိုင်တာက ငွေကြေး အကျိုးအမြတ် တစုံတရာအတွက် ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။ ကျနော့် အနေနဲ့ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းအတွက်
ကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော့် ဘလော့နာမည် ဒါမှမဟုတ် ကလောင်အမည် လောက်ကို ဖော်ပြရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း Blog, Forward mail စသဖြင့် မိုးပေါ်ကစာတွေကို အထူးသဖြင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ အလွယ်တကူ ကူးယူဖော်ပြ နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မိုးပေါ်က စာတွေကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ စာစောင်တွေမှာ ဖော်ပြတော့မယ်ဆိုရင် မူရင်း စာရေးသူကို အတိအကျ သိရအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် စာရေးသူကို အသိပေးပြီး တောင်းယူ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ရေးတဲ့သူကို သေချာ မသိရင် မဖော်ပြသင့်ပါဘူး။ ဘလော့ဂါ ဆိုတာကလည်း ကျနော့်လို ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်း ကမျောက်ကချောက် ရေးတဲ့လူကအစ ဘာသာရပ်အလိုက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာမူတွေကို ရေးသားနေတဲ့ လူတွေရော အများကြီး ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်က စီးပွားရေးအရ မဟုတ်ပဲ စေတနာနဲ့ ဝါသနာကြောင့် ရေးသားကြသူတွေပါ။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်အတွက် ထုတ်ဝေနေတဲ့ မီဒီယာတွေ အနေနဲ့ မိုးပေါ်ကစာတွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အသိအမှတ်ပြုမှု တစုံတရာ လုပ်သင့်တယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂါအပေါင်း
ဘန်းကျော်ရတဲ့ဒုက္ခ၊ ကော်နက်ရှင်ကျလို့ စောင့်ရတဲ့ဒုက္ခ၊ စာမူ အခိုးခံရတဲ့ဒုက္ခ အပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ကြပါစေ။ ။
စီးပွားရေးအရ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်
သူများစာတွေကို ကူူးယူပြီး ဖတ်စေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မူရင်းရေးသူရဲ့ ကလောနာမည်(သို့မဟုတ်) လိပ်စာလေးတော့ ဖော်ပြသင့်ပါတယ်
ဒါမှ မူရင်း စာမူရှင်နဲ့ သူရေးသားထားတဲ့ စာစုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ချီးမွမ်းတာတွေ။ ဝေဖန်တာတွေ။ အကြံပြု တာတွေ အစရှိသဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိကာ သိချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ
မူရင်းရေးသားသူနဲ့ အနေနဲ့လည်း သူ့အတွက် ဒီဆွေးနွေးမှုတွေဟာ နောက်ထပ်စာစုတွေ
ထပ်မံရေးသားဖို့အတွက် အားအင်တွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မန္တလေးသား ဘလော့ဂါကျော် ကိုပေါက်ကို အားကိုးပါရစေ ခင်ဗျား ….. Shade ဂျာနယ်တိုက်က တာဝန်ရှိသူတွေကို နောက်နောင် ဒါမျိုး မလုပ်ဖို့ တနည်းနည်းနဲ့ အသိပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျား ….
တူတောင် ချာမူလေးအခိုးခံရလို့ ဓေါပွနေဒါလေ
မှန်ပါတယ် သူကြီးရေ ဒီရွာထဲမှာတော့ ဒီကိစ္စကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လေးလုပ်ပေးပါ
တစ်ခါတစ်လေ ဝင်မန်းချင်တာတောင် စာလုံးတစ်လုံးမှ ထွက်မလာတာမျိုး ကြုံဘူးပါတယ် ပို့စ်တစ်ခုဆို ပိုဆိုတာပေါ့ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ပိုင်ရှင်ရဲ့ အားထုတ်မှုကိုတော့ လေးစားသင့်ပါတယ်
မနက်ကပဲ ခိုးကူး ခွေတွေအကြောင်းစဉ်းစားရင်း internet မှာ copy right မရှိပဲ ကိုယ်တိုင်ရေးစာတွေ ကူးယူ ပြန့်နှံ့နေတာကို တွေးမိပြီး စာပေဖြန့်ချိရေးလောက ပျက်များသွားဦးမလား၊ တကယ်စာပေနဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုနေတဲ့သူတွေ ကို ထိခိုက်လာမလား လို့ စဉ်းစားမိနေသေးတယ်။
ဪ………. အဆိုတော်တွေတင် ခိုးကူးကြောက်ရတာမဟုတ်ဘူး
ကိုဇဝန မတွေတာကြာပီ ဆိုတော့ ဦးပေါက်နဲ့ ဦးကောက် ကေစ့်လဲသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး
internet က တဆင့်ဖတ်နေတဲ့ စာတွေကို မိုးပေါ်ကစာလို့ ပြောထားတာကို သဘောကျမိလို့ပါ။ fiber line တွေကတော့ ပင်လယ်ရေအောက် ကနေလဲ ဆွဲထားတယ်ဆိုပဲ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) က တဆင့် ဂျာနယ်မှာ(စာရေးသူ၏ကလောင်နာမည်အား) ပြန်လည်ဖော်ပြပေးသင့်ပါမည်။
ဟုတ်ပါတယ် ခုတစ်လောလည်း အပြင်ဂျာနယ်တွေမှာ သတင်းအသစ်တွေ မတွေ့ရပဲ ဘလော့ဂ်တွေပေါ်က အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ အတွေ့များလာတယ်။ အိုင်တီလောကမှာလည်း copyright ကိစ္စပဲ စကားများနေကြတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်ကလည်း စာအုပ်ထုတ်မယ်ဆို စာရေးသူကို အကြောင်းကြားသင့်တယ်လို့ ကျွန်မတော့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
စိတ်ပါလကက်ပါကို အသေအချာ ကူညီပေးပါမယ်။
ဒီဂျာနယ်မှာ ကျနော်လဲ အပါတ်စဉ်ရေးနေပါတယ်။
ကျနော်နဲ့ ဒီဂျာနယ်ရဲ့ဆုံးဆည်းမူ့ကလည်း ကျနော်ရဲ့
အဲဒါနဲ့ကျနော်အယ်ဒီတာဖြစ်သူ ကို ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ သူလည်းဒီရွာထဲမှာ ဖတ်ဘူးတယ်
အဲဒီစာမူမှာတော့ ကျနော်နာမယ်ကို ထည့်ပေးပါတယ်။
ရှေ့နေမလိုက်ဘဲပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီဂျာနယ်က စောင်ရေသိပ်မရှိတဲ့အတွက် စီးပွားရေးအရ အကျိုးအမြတ်မရှိတာကတော့ သေချာပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လူခြင်းဆက်သွယ်ဘို့ မသိလို့ယူသုံးတယ်ဆိုပေမယ့် ရေးသူနာမယ်ကိုတော့ ဖော်ပြပေးဘို့ သင့်တယ်ဆိုတာ ကျနော်လဲ စာရေးသူူခြင်းကိုယ်ခြင်းစာပါတယ်။
ကျနော်အယ်ဒီတာကို ဆက်သွယ်ပြီး ဒီကိစ္စကိုကောင်းမွန်စွာပြောပြပေးပါမယ်။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ အယ်ဒီတာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလဲ စာပေကို ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါ။
သူကို အခုဒီစာမူရေးသူ ပိုင်ရှင်နဲ့ ဒီရွာထဲကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဘို့ ပြောပေးပါမယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုပေါက်ခင်ဗျား …. ကျနော့် ဘလော့မှာလည်း ကျနော့် အီးမေးလ် လိပ်စာ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ … ကျနော့်ကိစ္စထက် နောက်နောင်ကို ဆင်ခြင်နိုင်အောင်လို့ ခုလို တင်ပြရခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးကြစေလိုပါတယ် ….
( အချက်ပြေ )
(* _ ^)
ဒီဆိုက်က အဘမ်းမခံရသေးတာပဲ ရှိတာ …နာမည်ကြီးနေတာပဲ…. တဖြည်းဖြည်းစပ်စုရင်းပိုသိလာလို့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်းတွေပဲ ရေးတော့တယ်… ။
ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းတိုက်၊ ရုပ်သံဌာနတွေက ဝင်ကြည့်နေပါတယ်… ။ ဟိုးတလောက သင်္ကြန် အတက်နေ့မှာ DVB ကလာတဲ့ အင်တာနက်က သကြန်အကြောင်းလေးပြောတဲ့အခါ ပထမဆုံး ဒီဆိုက်က ပို့စ်တစ်ခုကို ရည်ညွှန်းတာ ပုံနှင့်တကွပါလာတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်… ရေးတဲ့လူမမှတ်မိတော့ပါဘူး … ။ပြည်တွင်း နာမည်ကြီး ဂျာနယ်တိုက်က အယ်ဒီတာ တယောက်နဲ့ ဆုံတော့လည်း … ဒီဆိုက်အကြောင်း သိနေပြန်တယ်… ။အကြောင်းရာပြောတာနဲ့ စာရေးသူ ဘယ်သူဆိုတာပါ တန်းပြောနိုင်အောင် သေချာဖတ်ထားပုံပါပဲ ။ နောက်တခါ … ဂျာနယ်လစ်တယောက်နဲ့ စကားပြောရင်း မသိမသာ မေးကြည့်တော့ …သူလည်း သိနေပါသတဲ့ … ။ ကျမရေးတဲ့ တော်ဝင်စင်တာက အကြောင်းတုန်းကလည်း သူတို့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဝင်ဖတ်တာတွေ့ရပါတယ်… ။ တကယ့်အမှန်ကန်ရေးတဲ့ လူတွေရဲ့ စာကို ကူးလျှင်တော့ နာမည်လေး ၊ ဆိုက်လေး ဖော်ပြသင့်တာပါပဲ… ။ အင်တာနက်ပေါ်ကရလို့ ဆိုပြီး …. ကိုယ်ရေးသလိုလို ပုံနှိပ်တာကတော့ နည်းနည်း လွန်သွားတယ်ထင်တယ်…။ ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ဂြိုလ်သား ဆိုပြ ီးပါလာသေးတယ်လေ… အင်တာနက်ထဲက Hoax ကို သတင်းလုပ်ပြီး တင်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်… အပတ်စဉ် အလျှင် မှီအောင်ထွက်ဖို့က အရေးကြီးတာကိုး
ဒီဗွီဘီ မှာ အင်တာနက် ထဲက ကောင်းနိးရာရာ ဆိုပြီး ဒီဆိုက်က ပိုစ်တခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောသွားတာ ပထမ ဆုံးကြားမိတယ်။ အရင်ကတော့ ပြောမပြောမသိဘူး.. ပိုစ်ကို the red ရေးတာ ထင်တယ် နွေရာသီပူပူမှာ ဆွမ်းလောင်းပြီး ရေချိုးလိုက်တာ ချက်ချင်း ဘုန်းကနဲ လဲပြီး သေသွားတဲ့ အဘွား တယောက် အကြောင်း ရေးတဲ့ ပိုစ် ကို ပညာပေး အနေနဲ့ ပြောသွားတာ ကြားမိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ခဏခဏ ကြားမိတတ်ပါတယ်။
အဲဒီ ကတည်းက သိတယ်.. ဒီဆိုက်က အားလုံး ဝိုင်းကြည့်နေကြမဲ့ ဆိုက်ဆိုတာသိနေပါတယ်။
အီးတုံးပြောတာက ဦးကောက် Eleven ကနေ ကူးတင်တဲ့ မဏ္ဍပ်တွေ အကြောင်းပါ
ညီလေးစာကိုယူသုံးခံရတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အဲဒီဂျာနယ်တိုက် က အယ်ဒီတာနဲ့အကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
သူအကျင့်က အင်တာနက်မှာ ဝင်ဖတ် သူကြိုက်ရင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ သိမ်းထားတတ်ပါတယ်။
သူက ညီလေးရဲ့နာမယ်ကို မသိတဲ့အတွက် (ဖော်ဝပ်မေးကရတယ်လို့ဆိုပါတယ်)သူမထည့်လိုက်မိဘူးလို့ ကျနော့်ကိုပြောပါတယ်။
အဲတော့ သူက ညီလေးရဲ့စာမူကို နောက်ထပ်သုံးချင်ပါတယ်။
“ယောက်ျားဆိုတာ”ရဲ့အဆက် “မိန်းမဆိုတာ” ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ညီလေးရဲ့အမြင်ကိုရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
အဲဒီညီလေးရဲ့အမြင်ကို ပုံနှိပ်ဖော်ပြရင်း အရင်တပါတ်က စာမူကို ယူသုံးမိတာရယ် နာမယ်မထည့်မိတာရယ်အတွက်သူက တောင်းပန်စာထည့်ရေးပေးပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ်ပ သူအကြံပေးတာ တစ်ခုက အခုညီလေးရဲ့နာမယ်သည် အရင်က ရှိခဲ့ဘူးသော ဆရာ ဇဝန နာမယ်နဲ့တူနေပါတယ်။
အဲတော့ ညီလေး အမြဲသုံးမယ့်ကလောင်နာမယ်တစ်ခုကို ရွေးပြီး ဒီဆိုက်ထဲမှာဘဲ မိန်းမဆိုတာ လေးကိုညီလေးက ရေးပြီးတင်ပေးစေလိုပါတယ်တဲ့.။
အကိုက သူ့ကို အကြံတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။
အကိုတို့လိုအင်တာနက်မှာစာရေးသူတွေက ဝါသနာကို အရင်းခံလို့ရေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ တကယ်လို့များ စာမူကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင် ကော်မင်းပေးရင် ခွင့်တောင်းမယ်ဆိုရင် အားလုံးစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကိုပေါက် တာဝန်ကျေပြီလို့ယူဆပါတယ်။
ညီလေး က အကို အကောင့်ကို အင်ဗိုက်လုပ်စေလိုပါတယ်။
ဒါမှ အကို ဆက်ပြီးကူညီပေးဘို့ လွယ်ကူသွားပါမယ်နော်။
အခုလို တခုတ်တရ ကူညီတဲ့အတွက် ကိုပေါက်ကို ကျေးဇူးအလွန် တင်ပါတယ်။ ကိုပေါက်မေးလ်ကိုလည်း အက်ထားတာ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ အယ်ဒီတာကိုလည်း အကြံပေးလိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ဖော်ဝပ်မေးက ရတာမျိုး ဆိုရင်လည်း နည်းနည်းလောက် Googling လုပ်လိုက်ရင် Source ကို သိနိုင်ပါတယ်လို့ ။။။
သူကြီးက ဝမ်းသာသွားတဲ့အတွက် ဒီပို့စ်ကို ဝင်ရောက်ပြီး Comment ပေးသူတိုင်းကို
ပွိုင့် 5000 စီ ထပ်ထည့်ပေးမယ်တဲ့
(မှတ်ချက်။ အိမ်မက်အရ ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်)
ကြည့်ရတာ… ရွာသားတွေစုပြီး .. ခိုးကူးစာ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်မှနဲ့တူတယ်..။
အက်ရှင်ကတော့ .. ယူအက်စ်အခြေစိုက်မီဒီယာအင်အားတခုဖြစ်တဲ့ မန္တလေးဂေဇက် ယူသုံးနိုင်တာပေါ့..။
(အနည်းဆုံးတော့.). မန္တလေးဂေဇက်ကကန့်ကွက်ထားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်..ဂျာနယ်..မဂ္ဂဇင်း သမားတွေဆိုရင်.. ယူအက်စ်ဗီဇာတော့ မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့..။
ပညာတော်သင် အခွင့်အရေးတွေ လွတ်ကုန်မှာပဲ..။
ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ ကိုပေါက်ရဲ့ ကူညီမှုကလည်း ထိရောက်ပြီး အကျိုးများပါတယ်။